7 Ọ bụrụ na ị ka na-eto eto ma na-efe Jehova, olee otú okwukwe ga-esi nyere gị aka ịma ihe ị ga-eji ndụ gị mee? Ọ ga-adị mma ka i kpebie ihe ị ga-eme n’ọdịnihu. Nwee okwukwe ná nkwa Chineke. Kpatara onwe gị akụ̀ ga-adịru mgbe ebighị ebi, ọ bụghị akụ̀ ga-adịru nwa oge. (Gụọ Matiu 6:19-21.) Ọ bụ ya ka otu nwa agbọghọ aha ya bụ Sophie kpebiri ime. Ọ na-agba egwú nke ọma. N’ihi ya, òtù dị iche iche na-agba egwú n’Amerịka kwere nkwa na ha ga-azụ ya n’ụlọ akwụkwọ nakwa na ha ga-enye ya ọkwá a na-achọ achọ n’òtù egwú ha. Sophie kwuru, sị: “Otuto a na-enye m na-atọ m ụtọ. M chedịrị na m ka ndị ibe m mma. Ma, obi anaghị adị m mma.” O mechara lee vidio Bekee bụ́, Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị—Gịnị Ka M Ga-eji Ndụ M Mee? Mgbe o lechara ya, ọ sịrị: “M ghọtara na ụwa emeela ka a na-anụ aha m, ndị mmadụ ana-etokwa m. Ma, o mere ka m ghara iji obi m niile na-efe Jehova. M kpekusiri Jehova ekpere ike ma kwụsị ọrụ ịgba egwú.” Olee otú obi dị ya maka ihe a o mere? Ọ sịrị: “M naghị akwa mmakwaara. Obi dị m ezigbo ụtọ ugbu a. Mụ na di m na-asụ ụzọ. Anyị abụghị ndị a ma ama, anyị abụghịkwa ndị aka ji akụ̀. Ma anyị nwere Jehova, nwee ndị anyị na-amụrụ Baịbụl, nweekwa ihe ndị anyị kpebiri imekwu n’ozi Jehova. M naghị akwa ụta.” 8. Olee ihe Baịbụl kwuru nke ga-enyere onye na-eto eto aka ikpebi ihe ọ ga-eji ndụ ya mee?
13 Rịọ Jehova ka o nyere gị aka. Nweekwa okwukwe na ọ ga-aza ekpere gị. Gwa ya ihe bụ́ ụjọ gị na ihe na-enye gị nsogbu n’obi. A sị ka e kwuwe, ọ bụ Jehova nyere gị ọrụ ahụ, ọ ga-enyekwara gị aka ka ị rụọ ya nke ọma. Olee otú ọ ga-esi eme ya? Ọ bụ otú ahụ o si nyere Mozis aka. Nke mbụ, Jehova kwere gị nkwa, sị: “M ga-eme ka ị dị ike. M ga-enyere gị aka. M ga-eji aka nri m nke ezi omume jidesie gị ike.” (Aịza. 41:10) Nke abụọ, ọ na-echetara gị na i kwesịrị ịtụkwasị ya obi na ọ ga-emezu nkwa ya. Ọ sịrị: “Ekwuwo m ya; m ga-emekwa ka o mezuo. Akpụwo m ya, m ga-emekwa ya.” (Aịza. 46:11) Nke atọ, Jehova na-enye gị “ike karịrị ike nkịtị” ka i nwee ike na-ejere ya ozi. (2 Kọr. 4:7) Nke anọ, Jehova mere ka i nwee ụmụnna n’ụwa niile, bụ́ ndị ‘na-akasirịta ibe ha obi ma na-ewulirịta ibe ha elu.’ Jehova si otú a na-enyere gị aka ka ị ghara ịkwụsị ijere ya ozi. (1 Tesa. 5:11) Mgbe ọ bụla Jehova nyeere gị aka ịna-ejere ya ozi, okwukwe i nwere na ya na-esikwu ike. Ọ ga-emekwa ka ị ghọta na ihe ùgwù ndị o nyere gị karịrị ihe ọ bụla i nwere ike inweta n’ụwa. MOZIS “LEGIDERE ANYA N’ỤGWỌ ỌRỤ A GA-AKWỤ YA”
mailto:?body=Ṅomie Okwukwe Mozis%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2014282%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ṅomie Okwukwe Mozis